လေနုအေး: မြှောင်မြှောင်တို့ မိသားစု
Posted by တန်ခူး at 10:04 PM
အိမ်ကတစ်ယောက်လဲ သူ့မှာ စိတ်ကူးအဖော် အမြဲရှိတယ်..
အဲ့ဒါကို ကျနော်က နားမလည်ဘူးး
အမြဲ သူ့ကို ဆူတယ်..
သူတို့က သက်မဲ့တွေ ဘာလို့ တတွတ်တွတ်ပြောနေရတာလဲ လို့..
နောက်ပြီး ကျနော်က ကလေးနဲ့ မကစားတတ်ဘူး..ဆိုတော့..ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေထဲက
ကလေးချစ်တတ်သူ ၂ယောက်နဲ့ သူရင်းနှီးပါတယ်..
အခုတော့..စိတ်ကူးအဖော်ဆိုတာ တဖြည်းဖြည်း နားလည်လာသလိုပဲ..
တစ်ဦးတည်းသော သား..သမီးတွေ သနားစရာပဲနော်..
အခုလို မြန်မာမဟုတ်တဲ့ တခြားနိုင်ငံမှာ ပိုဆိုးး..။။
သားသားအဖော်ရအောင် ညီမလေးဖြစ်ဖြစ် ညီလေးဖြစ်ဖြစ် တယောက်လောက် မွေးပေးလိုက်ပါလားဟင်။ တယောက်ထဲ ကလေးတွေဆို အဲဒီလိုပဲ ဖြစ်တတ်တယ် ထင်ပါရဲ့နော်။ သားသား သနားပါတယ်။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကျတော့လဲ သက်တမ်းက တိုတော့ ကိုယ်က သံယောဇဉ် တအားတွယ်မိတဲ့ အချိန် သူတို့လေးတွေ တခုခုဖြစ်သွားရင် စိတ်ထိခိုက်ရအုံးမှာ။
မ-လဲ ငယ်သေးတာပဲ ... စဉ်းစားပါနော် .. ။
ငယ်ငယ်က အမေ့ကို ညီငယ်ညီမငယ်တစ်ယောက် အတင်းမွေးခိုင်းတာ သတိရမိတယ်။
အမရေ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်ရတာ မကောင်းဘူးဗျာ
အမရေ... ချစ်စရာ သမီးလေးတယောက်လည်း တွေ့ထားတယ်နော်..
ကလေးတွေကို ချစ်တဲ့ ..ကျနော်.. အခုတော့ ကလေးတွေနဲ့ မဆော့ရတဲ့ နေရာမှာ..တယောက်တည်းး အထီးကျန်နေတယ်..
ဒီကိုပြောင်းလာကြပါလားး ကျနော်လည်း သားလေးနဲ့ အဖော်လုပ်ပေးမယ်..လေ..
မိခင်တယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုကိုယ်ချင်းစာခံစား မိပါတယ်... ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်မှာခလေးတယောက်၊ နှစ်ယောက်ဘဲယူကြတော့တာဆိုတော့... သူများတွေလဲဒီလိုပါဘဲလို့ဖြေတွေးကြည့်ပါလား...
စာမရေးတာကြာလို့ အခုပြန်ရေးတော့လဲ ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ။ သားသားရဲ့ မြှောင်မြှောင်လေးနဲ့ သူပျော်နေတာဖတ်ရတော့ ၀မ်းသာ ၀မ်းနည်းကြီး။
ချိုသင်းတို့မှာတော့ မောင်နှမတွေ တပုံကြီး ရှိတာတောင် အဲဒီလို စိတ်ကူးအဖော်လေးတွေ ရှိခဲ့ဖူးတာ။ သူတို့က အားလုံးကိုယ့်သဘော ကိုယ့်ဆန္ဒ ကိုး။ ငယ်ငယ်က မိနီ တဲ့၊ အရုပ်မလေး တရုပ်။ ၈တန်းလောက်ရောက်မှ ပေါင်တွေကျိုး ပျက်စီးနေလို့ ပစ်လိုက်ရတာ။ ကြောင်လေးတွေလဲ ကိုယ့်အဖော် ဖြစ်ခဲ့တာပါပဲ။ ကလေးဘ၀က အပြစ်ကင်းပါတယ်နော်။
ညီအစ်မနှစ်ယောက်ရှိတယ်။အသက်လဲမကွာဘူး။ ၀မ်းကွဲတွေလဲ တပုံကြီးပဲ။ ဒါပေမယ့်စိတ်ကူးအဖော်တွေအများကြီးရှိတယ်။ အရုပ်တွေ၊ ပန်းပင်လေးတွေ။ အဲဒီထဲမှာ အချစ်ဆုံး၊ တိုင်ပင်ဖော်က ဖက်အုံးလေး။ ဖက်အုံးလေးကို မဲမဲလို့နာမည်ပေးထားတယ်။ ကိုယ်အ၀တ်တွေ ပေးဝတ်တယ်။
စုတ်ပြတ်ပြီးနောက်ဆုံး ဖက်မရတော့မြှ ပစ်လိုက်ရတယ်။
တန်ခူးရေ ... သမီးကတော့ ညအိပ်ရင် မွှေးပွရုပ် ခွေးလေးရယ် ကျားလေးရယ်နဲ့ အိပ်တယ်။ သူ့အဖော်တွေလေ။ ခွေးလေးနာမည်က ပုံဆိုး ရုပ်ဆိုးလို့၊ ကျားလေးနာမည်က တိုက်ဂါးတဲ့။ ညညကျ တရေးနိူးရင် အဲဒီ၂ကောင်ပျောက်လို့ ရှာရတာအမော။ ခရီးသွားရင်လဲ သူ့အကောင်တွေ တပွေ့ပွေ့နဲ။ ရယ်လဲရယ်ရတယ်။ သားသားရဲ့ မြောင်မြောင်တွေတော့ သမီးက ကြောက်တယ်တော့။ မိန်းခလေးမို့နဲ့တူတယ်။
သားက ချစ်စရာလေး။ အိမ်မြှောင်လေးတွေနဲ့ စကားပြောပြီး ဆော့တာကို သဘောကျသွားတယ်။ စိတ်ကူးယဉ် အဖော်ဆိုတာ ကလေးတွေမှာ ရှိတတ်ပါတယ် မတန်ခူးရေ။ စိတ်မပူပါနဲ့။ ပုံရိပ်တို့လည်း ငယ်ငယ်က သက်မဲ့ အရုပ်လေးတွေကို စကားပြောဖူးပါတယ်။ :D
အပေါ်က အကောင်လေးကို ကြောက်လို့ ပုံကို ကွယ်ပြီး စာတွေလာဖတ်ပါတယ်...
သူ့ စိတ်နှလုံးလေး နူးညံ့တာ ပေါ်လွင်နေတယ်နော်...။
ဒါပေမယ့် စာဖတ်ပြီး တွေးရင်း တွေးရင်း ဘယ်သူ့ကိုမှန်းမသိ... ပြီးတော့ ဘာကိုမှန်းမသိ နဲနဲတော့ နာကျည်းသွားတယ်။ ဒီလိုပဲပေါ့.. ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲလေ လို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လဲ ဖြေတွေးသွားပါတယ်...။
တခါတခါကြတော့ ကိုယ်တွေက အတ္တတွေ သိပ်ကြီးလို့ ကိုယ့်အတွက်ပဲ ကိုယ်စဉ်းစားမိနေလို့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ နှေးကွေးပြီး အချိန်တွေ လွန်သွားခဲ့သလားလို့လဲ တရှည်တလျား တွေးနေမိသေး......
အတွေး အင်္ဆုးမှာတော့ အို.... ဒါတွေဟာ သူတို့တွေ အတွက်ပါပဲ ရယ်လို့ မလုံမလဲ ဆင်ခြေတွေ ပေးနေမိပြန်တယ်ပေါ့...။
မြန်မာပြည်က တူလေးမှာလည်းအဖော်အိမ်မြှောင်၇ှိတယ်.. သူ့ကိုနာမည်ပေးထားတာ အောင်မြှိန်တဲ့...။
သူငိုရင်အောင်မြှိန်တို့အိမ်အလည်သွားကြမယ်ဟေ့လို့ပြောပြီး TV နောက်နံရံက အိမ်မြှောင်တွေကိုသွားပြရတယ်...။
ဒါက Officially လာပြောတာပါ.. ဟီဟိ
စိတ်ကူး အဖော် အခုအရွယ်မှာတောင် ရှိတယ် အမရေ
အဖော်လိုတာလေ။ တဦးတည်းသောသား ကို အမြဲဖတ်ဖြစ်လား
အသဲယားလိုက်တာ.. အိမ်မြောင်ဆိုအရမ်းကြောက်.. ဒါပေမယ့် ရေးထားတာလေးစိတ်ဝင်စားတယ်.. ကျွန်မလဲ အရုပ်လေးတွေနာမည်ပေးရတာဝါသနာပါတယ်.. အကောင်လေးတွေရောပေါ့..း)
သားသားအကြောင်းကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာတွေချည်း...မှန်းကြည့်ရတာတော့ ကြီးလာရင် သူ့မေမေလို စာတွေရေးဦးမယ် ထင်တယ်...
မမရေ အိမ်မှာ အင်တာနက် ပြတ်နေလို့ ခုမှ ဖတ်ဖြစ်တယ်။
ဒီအကြောင်းဖတ်ရတာ တကယ်ပဲ စိတ်ဝင်တစား ၀မ်းနဲ...
ကျွန်မလဲ ငယ်ငယ်က မိသားစုနဲ့ မကြီးရဘဲ (ဖေဖေ့ဘက်က အဘိုးအဘွားတွေနဲ့) တယောက်တည်း ကြီးလာရတာ.. lonely ပဲပေါ့။
ကိုယ့်ဘာသာ ပုံမှန်ကြီးလာရတယ်လို့ မထင်ခဲ့ဘူး။
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်မိတော့ ငယ်ငယ်က ဗမာကော်ပတ်ရုပ်နဲ့ ဘိုမရုပ် နှစ်ရုပ်ကို သတိရမိတယ်။
သူတို့မှာလဲ နာမည်ရှိတယ်။ ဗမာရုပ်က မိုကိ တဲ့။ ဘိုမရုပ်က လာလာ လို့ခေါ်တယ်။
ကိုယ့်ဘာသာပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘွားဘွားပေးထားတာ။ မိုကိ ဆိုတာ မိကို လေ။ ကျွန်မရဲ့ Sir Name ကို ပြောင်ခေါ်ထားတာ။
သားသားကြီးလာရင်..သေချာပေါက် စိတ်ကူးဖော်လေး ရမှာပါ။း)
အိမ်က သားလဲ သူ့ အဖော်တွေက အရုပ်တွေပဲပေါ့ . . . သူ့ ကိုတိရစ္ဆာန်အကောင်သိအောင် ကျား၊ င်္ခြသေ့၊ ကျားသစ်၊ မြင်း၊ နွား၊ သမင် စတာတွေ ဝယ်ပေးထားတယ် . . . သေးသေးလေးတွေပေါ့ . . . အဲဒီမှာမိကျောင်းသေးသေးလေးလဲပါတယ် . . . အဲဒါ crocodile လို့ သင်ထားတယ် . . . တနေ့ အိမ်ပြန် တံခါးဖွင့်လိုက်တော့ ရုတ်တရက် အိမ်မြှောင်ကပြုတ်ကျပါလေရော . . . သားက crocodile ပြုတ်ကျတယ်ဆိုလို့ရီရသေးတယ် . . . သူ့crocodile ရုပ်က အိမ်မြှောင်အရွယ်ပဲလေ . . .
သားသားအကြောင်းဖတ်ရတော့ စိတ်မကောင်းဘူး.. သနားလည်း သနား ချစ်ဖို့လည်း ကောင်းတယ်နော်... ဒါတောင် အမတို့က သားကို သူငယ်ချင်းလို လည်း အဖော်လုပ်ပေးတယ်.. အတူလည်းကစားပေးပြီး ကလေးအတွက် အချိန်ပေးနိုင်တဲ့ မိဘတွေပါ.. ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ကလေးတွေအတွက် ညီအကို မောင်နှမ ရှိရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ..အမရယ်..နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ မြန်မာကလေးတွေက ပိုဆိုသေးတယ်.. ကံလည်း ပါသေးတာကိုး.. အဲဒီအတွက်တော့ စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့နော်.. :(